WAR CUSUB: Sino-Europe Sports oo amaah ku iibsanaysa AC Milan! – Gool FM
WAR CUSUB: Sino-Europe Sports oo amaah ku iibsanaysa AC Milan!
Raage January 9, 2017
(Beijing) 09 Jan 2017 – Warar haatan soo baxaya yaa tibaaxaya in dallada Chinese-ka ah ee Sino-Europe Sports ay soo amaahan doonto lacagta ay ku iibsanayso AC Milan si heshiiska loo saxiixo xilliga loo qabtay.
Dalladdan Chinese-ka ah ayaa heshiis ay ku iibsanayso kooxdaasi kula jirta Silvio Berlusconi, balse waxaa heshiiskan hertiyay dib u dhacyo dhowr ah iyadoo haatan lagu ballamay 3-da bisha Maarso, balse MilanNews ayaa sheegaya inaysan u badnayn in xilligaa fasax laga helo dowladda Shiinaha si lacagta looga soo diro dalkaasi.
Waxaase la sheegayaa in Sino-Europe ay sugi doonto ilaa iyo 15-ka Febraayo, iyadoo haddii aan xilligaasi loogusoo fasixin €320m oo ka dhiman lacagta lacagta kooxda lagu iibsadey baananka ka qaadan doonta amaah taasoo ay samayn karto sharciyan.
Waxaa durba la sameeyay hay’ad cusub oo la yiraahdo Rossoneri Sport Investment, taasoo laga dhisay Luxembourg si ay maamulka kooxda ugala wareegto Fininvest oo hadda maamusha.
TOOS u daawo: Abaalmarinta Laacibka Adduunka ee Best FIFA Football Awards - 2017 - LIVE
XULKA SERIE A: Waa kuwee 11-ka laacib ee todobaadkan ugu xariifsanaa horyaalka Talyaaniga?